काठमाण्डौमा माओवादीको प्रभाव सकिएकै हो त ? – Himalaya TV
काठमाण्डौमा माओवादीको प्रभाव सकिएकै हो त ?
५ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार २१:४४
काठमाण्डौ, ५ जेठ । प्रदेश नम्बर ३ काठमाण्डौमा १ महानगरपालिका सहित १० नगरपालिका रहेका छन् । कति नगरपालिकाकाे नतिजा अाइसके भने कतिकाे नतिजा अाउने क्रममा छ ।
जारी मतगणनामा पहिलो स्थानमा एमाले, दोस्रो स्थानमा कांग्रेस र तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । अहिलेसम्म ३४ जिल्ला मध्ये विभिन्न जिल्लाका मतगणनाहरु आइसकेका छन् भने कतिपय स्थानबाट आउने क्रम जारी रहेको छ ।
मतगणना भइरहँदा काठमाण्डौमा भने माओवादी शून्य नै छ । एक महानगरपालिका र १० नगरपालिका रहेको काठमाण्डौमा माओवादी प्रभावहीन देखिएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा मतगणना चलिरहँदा मेयरमा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ भने कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उपमेयरमा भने कांग्रेसकै अग्रता कायम छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा माओवादीको कुनै असर देखिएन । उक्त नगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेसले बाजी मार्दा एमाले मुख्य प्रतिद्वन्दी रहेको थियो । उपमेयरमा पनि कांग्रेसले नै जीतेको छ ।
टोखा नगरपालिकाको मेयर उपमेयरमा एमालेले जित्दा पनि कांग्रेस नै मुख्य प्रतिद्वन्दी देखिएको थियो । तार्केश्वर नगरपालिकामा मतगणना जारी रहँदा मेयर उपमेयर दुबै पदमा एमालेले अग्रता कायम गरिरहँदा कांग्रेसले पछ्याइरहेको छ ।
नागार्जुन नगरपालिकाको मतगणना सँकिदा मेयरमा कांग्रेसले जित्दा एमाले दाबेदार देखिएको थियो भने उपमेयरमा एमालेले जित्दा कांग्रेस दाबेदार देखिएको थियो । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा मतगणना भइरहँदा मेयर उपमेयर दुबै पदमा कांग्रेसले अग्रता कायम राखिराख्दा एमाले दाबेदार देखिएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुबै पदमा एमालेले बाजी मार्दा पनि कांग्रेस नै दाबेदार देखिएको थियो । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा मतगणना जारी रहँदा मेयर उपमेयर दुबै पदमा एमालेले दाबी गरिरहँदा कांग्रेसले पछ्याइरहेको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुबै पदमा कांग्रेस अग्रस्थानमा देखिएको छ । उसलाई एमालेले कडा टक्कर दिइराखेको छ । माओवादी भने निकै पछाडि देखिएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाको मतगणना सँकिदा मेयर उपमेयर दुबै पदमा कांग्रेसले जितेको छ । एमालेले दुबै पदमा थोरै मतले हारेको थियो ।
शंकारापुर नगरपालिकामा पनि उस्तै देखियो । मेयर उपमेयर दुबै पदमा एमालेले जित्दा कांग्रेसले नै पछ्याइरहेको थियो ।